သာကူပြင်/Flattened Pearl Sago(Thargu Byin) | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
Danuphyu Daw Saw Yee (London)
စဉ်းတီတုံး သုံးတဲ့အခါ အရောင် ခွဲခြားမှု( how to use chopping boards)
ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံ/An assortment of various recepies
ရေသတ္တဝါများ (Seafood and fresh water fishes)
← ရွှေကြည်ဆနွမ်းမကင်း/Semolina Cake
ငါးဖယ်ချဉ် (ခ) ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နည်း →
သာကူပြင်/Flattened Pearl Sago(Thargu Byin)
သာကူပြင်ကို ကြိုက်လွန်းလို့အိမ်မှာ ခဏခဏပွဲမရှိလဲလုပ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းကိုစားကြတာ။ လွယ်လဲ လွယ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေ အလှူရှိရင်လဲ လက်ဆောင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်စကော့ဈေး မှာဆိုရင်တော့ ပျော့ပြဲပြဲလေးတွေကို ခပ်ပြီးဖတ်ခနဲထဲ့ပေးတာပါ။ ကျမရဲ့ သာကူပြင်လုပ်နည်းရဲ့ ထူးတာက ရိုးရိုးသာကူပြင်များက ဝယ်စားရင် ခတ်ပျော့ပျော့ဖြစ်ပြီး လှီးစိတ်တဲ့အခါအတုံးမလှတတ်ပါဘူး။ ကျမက ဘုန်းကြီးပွဲပြင်ရင် အတုံးလိုက်လေးလိုချင်တော့ အနဲငယ် လုပ်နည်းကို ပြုပြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျုံထဲ့ကြည့်တာအောင်မြင်သွားပါတယ်။ အတုံးလှလှ ပွဲပြင်နိုင်ရန်နဲ့ ဘယ်လို အရသာရှိအောင်လုပ်မလဲ ကြည့်ရအောင်နော်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ( ၈” * ၆” * ၂.၅* မုန့်ဖုတ်ဘန်း)
-သာကူ ၁၈၀ ဂရမ်
-သကြား ၁၀၀ ဂရမ်
-ဂျုံ စားပွဲတင် ၁ဇွန်း( သာကူအတွက် ) အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း ( အုန်းနို့ပြင်အတွက်)
-ဆား ၁/၂ အချိုဇွန်း
သာကူကိုရေများများနဲ့ စကျိုပြီး သကြား ထဲ့ပါ။ ဆားထဲ့ပါ။
သာကူကျိုတဲ့အခါ အုန်းနို့ အနဲငယ်( အနံ့မွှေးအောင်) ၄ဇွန်း (စားပွဲတင်) နှင့် ဂျုံ (wheat flour) စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း စာရေဖျော်ပြီးထဲ့ကျိုပါ။ အဆက်မပြတ် အိုးမကပ်အောင် မွှေပေးပါ။
သာကူများပျစ်ခဲလာပြီး အိုးမှာကပ်မနေတော့ဘူးဆိုရင် မုန့်ဖုတ်မဲ့ ဗန်းကို ထောပတ်ဆီသုတ်ပြီး မျက်နာပြင် ညှိထားပါ။အအေးခံထားလိုက်ပါ။
သာကူအအေးခံထားချိန်မှာ ကျန်သောအုန်းနို့ များကို သကြားနဲနဲထဲ့ ၊ဂျုံ လ္ဖက်ဇွန်း၁ဇွန်းရေဖျောပြီး ခပ်ပျစ်ပျစ်ကျိုပါ။ အုန်းဆီမဖြစ်သွားအောင်သတိထားပါ။
ကြွက်မြီးတန်း ပျစ်လာသော အုန်းနို့များကို အအေးခံထားသောသာကူမျက်နာပြင်ပေါ်သို့ လောင်းထဲ့ပါ။
ပြီးရင်Oven ထဲ ထဲ့ပြီး အပေါ်မီးသတ်သတ်ချည်း ၁၅၀ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ် ထားပြီး အုန်းနို့ပြင် တင်းရင် ထုတ်ပြီး အအေးခံပြီး လှီးစိတ်ကာ ပြင်ဆင်စားသုံးပါ. oven မရှိရင်တော့ ဒန်းအိုးအဖုံးပေါ်ကို မီးသွေးခဲ ရဲရဲတင်ကာ သာကူပြင်ဘန်းပေါ်ကနေ မြန်မာနည်းမြန်မာဟန်ဖြင့် အုန်းနို့ကို တင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်
I bake this flattened pearl sago more than often even if there is no party/donation at my home as I love it so much. It’s easy to do. It is often baked asapresent for my friends’ donations. Baton’s presiding monk in London loves my Thargu Byin. This is now baked for him. Let’s takealook.
-180g of pearl sago
-100g of sugar
-2 tins of coconut cream
Boil the pearl sago with lots of water and addatiny bit of salt. Here is an important bit coming. When you boil, addabit of coconut cream(to getalovely smell)and 1tbl spoon of wheat flour diluted in water into the pot. It will formapiece that can be cut as you wish. But in Scott Market’s side stall’s style, the hawker will just tear it apart fromapaste like cake. So it is important to haveabeautiful cut for the donations to the monks. By adding these wasasuccess.
Once the Pearl Sago has been transformed intoapasty form and not sticking into the pot, then add them into the buttered brushed baking tray and make sure that the paste is level.
While you cool down the pearl sago paste, boil the rest of the coconut cream withabit of sugar, 1tea spoon of wheat flour until it becomes quite thick. Careful though that you are not cooking for coconut oil.
All these thicken paste are to be poured on top of the surface of already cooled down flattened pearl sago.
Then, bake it in the oven for 15 minutes with 150 C from top heat only and once the surface isabit toughened then it is ready to cut and eat. Enjoy.
By eithet • Posted in မြန်မာမုန့်များ
53 comments on “သာကူပြင်/Flattened Pearl Sago(Thargu Byin)”
03/03/2012 @ 7:05 pm
ွှThank You recipe for Sago pudding..
I want know how to make Sago pudding…
I made many time not success..
03/03/2012 @ 9:25 pm
try this one nyi ma lay. thank u naw.
26/04/2012 @ 5:24 am
မမနည်း အတိုင်း နန်း သာကူပြင်လုပ်စားကြည့်တာ ဖြစ်တယ်မမ..အရမ်းလဲ စားလို့ အရသာရှိတာပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမအိသက်။
27/04/2012 @ 12:02 am
welcome par nann yay 🙂
ma su lwin
03/03/2012 @ 7:18 pm
03/03/2012 @ 9:20 pm
hote ma. try this one. it is worked and very nice. thanks
07/03/2012 @ 12:12 pm
07/03/2012 @ 2:32 pm
I am afraid it will not be turned out nice ma. I have never tried it with milk.:)
08/03/2012 @ 1:37 pm
thanks for your advice….however i’hv tried yr DAN-BOUK..it was tasty.(TQ sis)
08/03/2012 @ 1:41 pm
oh really !! thanksalot naw ma.i am so glad u like it .
Saw Myat Hsu
09/03/2012 @ 1:17 am
Yummy! One of my favourite.
09/03/2012 @ 1:36 am
09/03/2012 @ 6:37 pm
ဒန်ပေါက် ချက်ပြီးပြီး ကောင်းမှကောင်းဘဲ သူငယ်ချင်းေ၇
ဒီတခါ သာကူပြင် လုပ်စားကြည့်မယ်နော်
09/03/2012 @ 8:01 pm
09/03/2012 @ 8:26 pm
အုန်းနို့ ကိုအ အေးခံဘို့လိုသေးလားဟင်?
အေးပါ ငါသေချာ ဖတ် မှတ်ပြီး ချက်ကျွေးနေပါတယ် 😛
10/03/2012 @ 12:00 am
sorry har . i just saw ur question. no need to do that.
10/03/2012 @ 10:04 pm
10/03/2012 @ 11:27 pm
welcome chit sone lay:)
12/03/2012 @ 3:40 am
Thank you so much for ur sharing. Today I could contribute over 40boxes of Thar Ku Pyin to the Monastery’s Hta Ma Nel festival.That is one of my favorite burmese dessert and I never thought about to make it, but I’ve done by ur recipes. Cheers…
12/03/2012 @ 7:55 pm
oh really, Thank you for letting me know naw. I am really happy they turned out right. ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်နည်းလေးနဲ့ အလှူလုပ်တယ်ကြားရလို့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ကိုယ့်ကိုပါ ကုသိုသ်တွေရတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်၊ အချိန်ကုန်ခံ စာရေးပြီး အသိပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ 🙂
14/03/2012 @ 2:50 pm
ပေါင်မုန့် အုန်းနိ့ဆမ်း ဘယ်လိုလုပ်လဲ သိချင်လို့ပါ အရမ်းတော့ မခက်ဘူးထင်ပေမဲ့
မအိသက် တို့ ပြင်ဆင် တာ ကြည့်ချင်တာလည်းပါတယ်…..ပြောပြပေးပါလား …အဆင်ပြေရင်….
15/03/2012 @ 8:35 pm
ok nyi ma lay.
29/03/2012 @ 6:52 pm
I want to know english name (padarkaw) powder , i want to cook yakhaimutte, please tell me. thank
29/03/2012 @ 6:55 pm
galangal sis yay.
07/04/2012 @ 9:23 am
sis …can i use plain flour instead of wheat flour ?
08/04/2012 @ 3:19 pm
u can use self raising flour nyi ma . i hv never tried with plain flour 🙂
10/04/2012 @ 10:28 am
hi sis, can u pls tell how much water needed 🙂 thanks
10/04/2012 @ 7:22 pm
i added about 1and1/2 litre water.
13/04/2012 @ 9:11 am
ကောက်ညှင်းက english လိုဘယ်လို ခေါလဲ မ သိဘူးနော် အမ….
14/04/2012 @ 12:54 am
glutinous rice sis 🙂
23/05/2012 @ 4:51 am
Hi Ei Thet,
I made this one last night but mine wasabit watery and not firm at all. May be i put too much water when I boiled sago pearl. Can you please tell me how many cups of water for 180g of pearl sago? And also, I used Plain flour for the wheat flour as in your recipe. Do u think they work the same?
Anyway, the taste is really beautiful…Thank you so much for all the delicious & easy to follow recipes..You are so talented :0)
23/05/2012 @ 5:57 pm
yes they work and also self rising flour too:)
Aye Yu Maw
19/08/2012 @ 2:58 pm
20/08/2012 @ 1:01 am
🙂 welcome naw
30/08/2012 @ 8:06 pm
မရေ…ညီမလည်းသာကူပြင်အ၇မ်းကြိုက်တာ တကယ်လို့ oven မ၇ှိရင် ဘယ်လိုဆက်ပေါင်းလို့
ရမလဲ မ….oven အစားပေါ့နော်…အဆောင်မှာက gas မီးဖိုပဲထားပေးထားလို့ပါ…အဲဒါနဲ့ဘယ်လို
လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေး သိချင်လို့ပါ မရေ….ကျေးဇူးပါနော်….
09/09/2012 @ 7:34 pm
မရေ သာကူကိုရေများများနဲ့ကျိုဆိုတော့ ဘယ်လောက်ထဲ့ရမလဲဟင် တော်ကြာရေများသွားမှာစိုးလို့ပါ၊ အရမ်းစားချင်နေတဲ့မုန့်လုပ်နည်းလေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ချင်လို့ပါ။
09/09/2012 @ 11:50 pm
၂လီတာကစကျိုပါနော်၊ သာကူပျစ်လာအောင်တော့ရေကို နဲနဲစီထပ်ထဲ့ပေးနော် 🙂
22/10/2012 @ 5:07 am
လှီးစိတ်လို့ မရပဲ ဇွန်းနဲ့ပဲ ခပ်စားရတယ်မမရေ
စားလို့ကတော့ ကောင်းမှကောင်း 🙂
နောက်ထပ် လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် 😉
22/11/2012 @ 4:16 pm
Is it possible with video, that will be great and clear for everybody.
22/11/2012 @ 8:40 pm
my kitchen is not big enough to take video 🙂 i wanna do that too 🙂
19/12/2012 @ 10:08 pm
မရေ oven နဲ့မဖုတ်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဟင်
28/02/2013 @ 7:12 am
mama yay.. mama yet receipe twe nert home mar montasone lote sar pyit tal.. thanks naw… mama si mar mont lin ma yar lote nee shi yin tin pay par ohm shint.. mont lin ma yar sar chin loon lo 😀
01/03/2013 @ 11:13 am
17/03/2013 @ 9:58 pm
ဒီနေ.သာကူလုပ်ကြည်.တယ်။ သာကူကတော.ပျစ်ပါတယ်မာလဲမာတယ် after baking အဆင်.အထိ။ ဒါပေမယ်.အပေါ်ကအုန်းနို.ရည်ကအကြာကြီးကျိုပြီး ခပ်ပျစ်ပျစ်မှာရပ်လိုက်ပြီး ထည်.တာဘဲ။ After baking မှာအဲဒီ.ပျစ်ပျစ်ကြီးအတိုင်းဘဲထွက်လာတယ်။ အပေါ်ယံကတူးတူးလေးတော.ဖြစ်တယ်ဒါပေမယ်.ခဲမနေဘူး။ စိတ်တွေကိုညစ်သွားတာဘဲ။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်အုံးမယ်။ အဲဒါဘာကြောင်.လဲ ဂျုံမှုန်.နည်းနည်းပိုထည်.ရမယ်ထင်တာဘဲ အုန်းနို.ကျိုတဲ.အခါလေ။ အိသက်ပုံထဲကအတိုင်းမဖြစ်တာ စိတ်ဓါတ်ကျစရာ။ ကြည်.တော.လွယ်မလိုနဲ.တကယ်လုပ်တော. အချိုးအစားမမှန်ရင် ဖြစ်ကိုမလာဘူး။ 😀 Thanks for your recipes!
18/03/2013 @ 12:38 am
မရေ ဂျုံးနဲလို့ထင်တယ် တချို့ အုန်းနို့ဘူးတွေက ရေပိုများတယ်။ အနှစ်နဲတတ်တယ်။ ဒီအခါကြာကြာပိုကျိုပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျိုပြီးရင် အအေးခံလိုက်ရင်လဲ အပေါ်အုန်းနို့ပြန်မာသွားတတ်ပါတယ်။ သိပ်ကျဲနေတာဆိုရင်တော့ ဂျုံးနဲနဲပိုထဲ့ပေးပါ။ 🙂
18/03/2013 @ 1:42 am
Thank you Eithet. I’ll fix it and will let you know next time I do.
18/03/2013 @ 7:12 pm
17/05/2013 @ 10:33 am
Wanna Eat!!! No oven!!! 😥
31/05/2013 @ 4:16 am
ma, i dun ve oven May I know can i bake it with microwave? Thank you..
23/12/2013 @ 5:31 pm
Ma yay, ma yet blog ko kyit pee tar ku pyin loan kyit nay tel. :). nyi ma ayann kyite tet mote ta khu lel pyit tel ma. ayann ko kyay zuu tin par tel.
24/12/2013 @ 1:15 am
wann thar par tae nyi ma lay yay 🙂
18/05/2014 @ 5:13 am
Thanks for giving your recipes.I can’t see yours. But can see when had been sharing by my fb friend.
K Thwe khine
02/08/2014 @ 5:10 pm
Love it .. ^ ^ thanks ma ei thet
LeaveaReply to Christy Zhang Cancel reply
find the recipes
ပုံမှန်ဟင်းချက်နည်းအသစ်များ တင်လျင်တင်ခြင်း ရယူပါ။/Suscribe
ဟင်းချက်နည်းအသစ်များကို email လိပ်စာသို့ တင်လျင်တင်ခြင်း ပို့ပေးပါမည်။/Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Join 6,042 other followers
ဟင်းချက်နည်းအသစ်များ ယခု ရယူပါ။/Suscribe now
ကိုရီယား အစားအစာ (8)
နိုင်ငံရပ်ခြား အနောက်တိုင်း၊ ဥရောပအစားအစာ (18)
Danuphyu Daw Saw Yee – Ei Thet
My birthday and our 8th Anniversary
The Big Day04/04/2014
The big day is here. It's my birthday as well as our wonderful anniversary. It was clear right from the start that me and him would never apart.
Foods I cooked for you